SmCo Magnets kukhona isizukulwane zomhlaba ezingavamile odonsa unomphela yesibili, kuyinto eliphezulu umthamo uzibuthe unomphela wenza kusukela Sm, Co, Fe nezinye izakhi mkhondo metal. Ngaphandle lokushisa max zokusebenza 300 ℃, it has ukumelana emangalisayo ngokumelene ukugqwala futhi namachibi. Ngakho, kungase kusetshenziswe Aeronautic nesikhala izimboni aomng abanye. Manufactures SmCo5 futhi Sm2Co17 odonsa zaba nobukhulu nokuma okuhlukahlukene. amaklayenti eminingi idinga amamaki YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, njll Machining futhi tolerances Thina ...
SmCo Magnets kukhona isizukulwane zomhlaba ezingavamile yesibili odonsa unomphela , kuyinto eliphezulu umthamo uzibuthe unomphela wenza kusukela Sm, Co, Fe nezinye izakhi mkhondo metal. Ngaphandle lokushisa max zokusebenza 300 ℃, it has ukumelana emangalisayo ngokumelene ukugqwala futhi namachibi. Ngakho, kungase kusetshenziswe Aeronautic nesikhala izimboni aomng abanye.
Manufactures SmCo5 futhi Sm2Co17 odonsa zaba nobukhulu nokuma okuhlukahlukene. Amaklayenti eminingi idinga amamaki YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, njll
Machining futhi tolerances
Thina sifinyelele usayizi ntathu nokubekezelelana ukusika noma ukugaywa nge super Abrasives by. Samarium Cobalt (SmCo) ayikwazi kutsho nge imishini ezivamile, ukuvula noma Milling izinqubo, futhi kufanele machined bengakakulungeli uzibuthe. Ngaphezu kwalokho, emikhulu noma eziyinkimbinkimbi kuvame uzibuthe ngaphambi inhlangano. tolerances Standard for Samarium Cobalt odonsa kukhona +/-. 005 "I-phansi Ubukhulu. Thina Izitokhi SmCo odonsa e block, indandatho kanye ifomu disc ezihlukahlukene osayizi kanye amamaki, futhi siyihlomele ngokuphelele ukukhiqiza ubukhulu nokubekezelelana ukuthi udinga.
1: 5 ingxubevange impahla
1: 5 inikeza 16 MGOe (amandla umkhiqizo) kuya ku-22 MGOe futhi yakhiwa cishe 50% samarium nokungu-50% ayibe. I 1: 5 uchungechunge has a esiphezulu Kunconywa yokusebenza lokushisa 250 ° C. SmCo 1: 5 odonsa zidinga aphansi izimfanelo ensimini kuka 2:17 izinto magnetize. Kwezinye izimo, 1:15 impahla kungenzeka uzibuthe lemijabo amaningi, inqobo nje uma umdlalo magnetizing iyatholakala.
2:17 ingxubevange impahla
2:17 unikeza 24 MGOe 32 MGOe futhi yakhiwa cishe 25% samarium, 5% yethusi, 18% yensimbi, 2% hafnium noma zirconium, nge kanti ayibe. I 2:17 uchungechunge has a yokusebenza lokushisa esiphezulu 350 ° C. amamaki ezikhethekile 2:17 ayatholakala okuyinto ongasebenza nasezinganeni okushisa aphakeme. SmCo 2:17 kudinga emasimini eliphezulu ngokwedlulele magnetizing, futhi amaningi isigxobo magnetization akunakwenzeka.
Vula bese ulanda Technical Data of SmCo Magnets
Isisekelo Impahla Magnetic
Isisekelo Impahla Magnetic:
lokushisa zokusebenza besikhatsi: 250-350 ° C
Maximum Energy yomkhiqizo: (Bhmax) (15-35 MGOe)
Maximum Ukusebenza lokushisa: (Temp.Tw) 250-350
Induction sibhekwe Force: (Hcb) 4-12 (Koe )
Magnetism asalayo: Br 0.8-1.2 (T)
esethola lokushisa Coefficient uzibuthe asalile (Br) -0.04 - -0,01
2. Nice lokushisa Ukuzinza
3. Ngenxa intengo nozwela ayibe, ngentengo yalo kuyabiza futhi kulula iyashintshashintsha
Ukukhiqizwa Inqubo ye Samarium Cobalt Permanent Magnet:
Powder inqubo → Ukucindezela → Sintering → impahla Magnetic test → ahlabayo → imikhiqizo siphelile
Samarium ayibe izinto ovame kusetshenzwe ngaphansi kwezimo un-uzibuthe, nge wheel idayimane gaya ezimanzi ukugaya esihle, okuyinto edingekayo. Ngenxa ongaphakeme ukuthungela lokushisa, samarium ayibe akumele ibe wawusomile. Vele ube yinhlansi encane noma zikagesi ekukhiqizeni kalula ukuqala umlilo, kanye lokushisa eliphezulu kakhulu, okuyinto okunzima ukulawula.
Samarium ayibe odonsa kukhona ziyaqothuka. Sicela ukuvikela ngomusa amehlo akho, iminwe nomzimba lapho usebenzelana nabo.
ukusebenza okuphezulu motors
Umahluko phakathi SmCo odonsa futhi Sintered NdFeB odonsa kakhulu zihlanganisa la maphuzu alandelayo:
1. amandla kazibuthe
Neodymium uzibuthe unomphela unamandla ukwedlula SmCo uzibuthe sisebenza kazibuthe.
(BH) Max ka NdFeB sintered isesikhathini 53MGOe, kuyilapho (BH) Max ka SmCo okokusebenza 32MGOe.
SmCo impahla unamandla ekumelaneni demagnetization kuka NdFeb impahla.
2. High lokushisa ukumelana
NdFeB akuyona aphakeme njengoba SmCo e okusezingeni eliphezulu lokushisa ukumelana. Umkhawulo zokusebenza lokushisa NdFeB 200 ℃ nokuthi SmCo isesikhathini 350 ℃.
3. Corrosion ukumelana
NdFeB odonsa akuzona kuhle ekumelaneni namachibi futhi ukugqwala. Ngokuvamile kufanele ivikelwe Plating noma cleaner emasakeni. Izinhlobo ezivamile enamathela zihlanganisa zinc, nickel, epoxy nabanye. SmCo odonsa ngeke rusting ngaphandle Plating.
4. Umumo, ukucubungula ukuhlangana
NdFeb futhi SmCo kukhona kokubili impahla ethambile, ngakho ayikwazi oluqanjwe abavamile ahlabayo ukucubungula.
I jikelele processing indlela kuyinto wire-electrode ahlabayo nesondo idayimane ahlabayo. Ngakho bobunjwa producible yalezi odonsa kulinganiselwe. Umumo yisixakaxaka akuzona asebenzayo. Ukukhuluma kuqhathaniswa, SmCo impahla ulula kakhulu futhi aphule kalula. Ngakho-ke, sicela uqaphele kakhulu ukuhlangana nokusebenzisa SmCo odonsa.
Eminyakeni embalwa edlule, intengo SmCo odonsa kwaba kabili noma ngisho ukudlula okwababhali NdFeB odonsa.
Eminyakeni yamuva, intengo NdFeB uvukile kakhulu ngenxa izinyathelo Country sika eqine ezimayini ezingavamile-umhlaba. Ngokuyinhloko, ezivamile NdFeB odonsa kancane kunezindleko samarium ayibe.
Olandelayo: Sintered Neodymium Magnets
Izinga Lokushisa Eliphezulu Magnet